10 Best Theme Parks Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Best Theme Parks Na Europe
Oge Ọgụgụ: 8 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 08/01/2021)
Otu n'ime ezumike ezinụlọ na-atọ ụtọ na-aga njem na-atọ ụtọ gaa otu n'ime ogige ntụrụndụ kachasị mma na Europe. Naanị na France, ị ga- 3 ogige ntụrụndụ dị ịtụnanya, ma anyi ewerewo aka anyi were 10 ogige ntụrụndụ kachasị mma na Europe maka njem ezinụlọ gị ọzọ. Ihe kacha mma n'ụwa nile na-agba ịnyịnya, enchanted ọhịa, ala anwansi, fairies, na njem nlegharị anya oge, na-eche gị, site na France ruo Austria na UK.
1. Europa-Park Na Nchara Germany
Ogige ntụrụndụ kachasị ibu na Germany, Ogige ntụrụndụ nke Europe nwere karịa 100 nkiri. Europa-Park bụ ogige ntụrụndụ nke abụọ kachasị ewu ewu na Europe, mgbe Disneyland gasịrị na Paris. Ọ bụrụ na gị na ụmụ gị hụrụ n'anya n'anya, mgbe ahụ ha ga-enwe a gbawara na 13 rollercoasters na ogige ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem na Strasbourg, mgbe ahụ ị kwesịrị ị na-eme atụmatụ ma ọ dịkarịa ala 2 ụbọchị maka Europe-Park. This is due to the number of exciting attractions already mentioned, na ihe ngosi ndị ọzọ dị egwu. The youngest will enjoy an enchanting elf ride, na sekit Big-Bobby-Car maka ndị ọkwọ ụgbọ ala na-achọ, mgbe ụmụaka ndị okenye na ndị nne na nna ga-agbapụ na Blue Fire Mega coaster na mbara ala Icelandic.
Ọzọkwa, ọ bụrụ n’ezie ị na-eme atụmatụ ogologo njem, mgbe ahụ ịnwere ike ịnọ na otu n'ime ụlọ oriri na nkwari akụ. Nke a ụzọ ị pụrụ ime ka ọtụtụ nke gị nleta Europe-Park, ma nweta ahịhịa niile: Site na Adventureland na Africa gaa Grimm’s Enchanted ọhịa.
Uzo esi aga Europe-Park?
Europa-Park dị ihe dị ka 3 awa si Frankfurt, i nwere ike iru ya ụgbọ okporo ígwè njem gafee Germany ruo Ringsheim. mgbe, ị nwere ike ịgbazite ụgbọ ala ma ọ bụ nyefe ụgbọ.
Cologne na Frankfurt Jiri ụgbọ oloko
Munich na Frankfurt Na A Train
Hanover gaa Frankfurt Jiri ụgbọ oloko
Hamburg na Frankfurt Jiri ụgbọ oloko
O nwere ike ịbụ ogige egwuregwu ama ama na nke anyị 10 ogige ntụrụndụ kachasị mma na ndepụta Europe, Disneyland na Paris bụ ọkacha mmasị n'etiti ndị ọbịa nke afọ niile. Ihe odide mara mma site na akụkọ Disney kachasị amasị anyị, na-adọta ọtụtụ nde ndị nleta kwa afọ.
Disneyland dị na obodo Chessy, na France. Ọ bụ n'ụlọ Walt Disney studio na ebe nkiri, ebe i nwere ike ịbanye n'ime akụkọ ifo, na nrọ gị niile bụ nwata na-emezu. Walwa nke Walt Disney na-adị ndụ, na ịtụnanya nkiri, na egosi dị ka labyrinth Alice na Mickey's 4D show.
Can nwere ike ịgbatị anwansi a na izu ụka dum, ma nọrọ na họtel Disney, ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ partnerụ partnerụ ndị njem na-esite na Disneyland.
Otu esi aga Disneyland?
Disneyland dị mma 20 Nkeji dị nso na Paris. Nwere ike ị nweta ebe a site na ọdụ ụgbọ elu Paris, ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè Marne-la-Vallee / Chessy.
3. Ogige Ndị Viennese Prater Na Austria
Prater Wien bụ ogige egwuregwu kachasị mma na Austria, na otu onye n'ime 10 ogige ntụrụndụ kachasị mma na Europe. Gị na ezinụlọ gị ga-enwe ihe ịtụnanya na ọtụtụ ọhịa rollercoasters, na mebere eziokwu ebe nkiri, dị ka Dr.. Archibald.
Na mgbakwunye, enwere ndị na-agba ụgbọ ala, anọgidewo na-anyụ ụlọ, ma bulie ya elu, ibu Ferris Wheel na Austria. Nnukwu ụkwụ ụkwụ Ferris a na-emeghe kwa afọ ma ọ bụ otu n'ime Ihe ngosi kachasi elu nke Vienna.
Uzo esi aga Vienna’s Prater Theme Park?
Ekpere ama mkpori ndụ dị na mpaghara nke 2 nke Vienna, ma ị nwere ike iru ya site na tagzi ma ọ bụ na ụzọ ụgbọ oloko site na etiti obodo.
4. Gardaland Italytali
Dị ka i nwere ike iche, Gardaland dị nso na Ọdọ Mmiri Garda na Italytali. Dị ka ogige ntụrụndụ nke dị n'akụkụ mmiri, Ogige ntụrụndụ Gardaland nwere ọtụtụ njem ụgbọ mmiri na-atọ ụtọ, dị ka ụgbọ mmiri Colorado, na oke ohia.
Na mgbakwunye, na Gardaland nwekwara aquarium mmiri nke ndụ n'ezie, nke 13 mpaghara themed, na 100 umu. Enweghị mgbagha ọ bụla, gị na na ga-nnọọ mmasị n'okpuru oké osimiri, agaghịkwa achọ ịpụ.
Na ntụle, ọ bụrụ na ị bụ ihe niile gbasara adrenaline, then you’d love the thrilling Blue Tornado rollercoaster.
Uzo esi aga Gardaland Theme Park?
Nwere ike iji ụgbọ okporo ígwè Trenitalia si Venice gaa ọdụ Peschiera del Garda, na mgbe ahụ ụgbọ mmiri gaa Gardaland.
Ogige ntụrụndụ na-akpali akpali bụ otu n'ime 10 ogige ntụrụndụ kachasị mma na Europe. Akụkọ ifo anyị niile tolitere na ndụ na ebe nkiri nke Efteling na oke ọhịa, site na Hans Christian Andersen ruo Brothers Grimm.
Fata Morgana ga-ebuga gị na Far East na ala nke Sultans, mgbe mmiri na ụsọ mmiri na ụsọ mmiri ga-ewega gị karịa nrọ gị. Ofwa nke fairies na-echere gị maka a ụgbọ mmiri siri n'ọchịchịrị na ihe omimi Droomvlucht.
Enweghị okwu ga-ezu iji kọwaa anwansi nke ogige Efteling maka ezinụlọ niile, yabụ na ị ghaghi iwepụta oge maka ogige isiokwu a na ezumike gị na Netherlands.
Uzo esi aga Efteling Park?
Can nwere ike iji ụgbọ okporo ígwè si Amsterdam ka 's-Hertogenbosch, na mgbe ahụ ụgbọ ala ozugbo na Efteling isiokwu ogige.
6. Ogige Legoland Theme Na Windsor UK
Mgbe nlegharị anya niile na-emegogo, ogige ogige a bụ paradaịs ọzọ maka ụmụaka. Emebere Legoland theme park na Windsor maka ụmụaka gbara gburugburu Lego toy system.
Ya mere, ọ bụla rollercoaster, ụgbọ mmiri, na ụgbọ okporo ígwè na-deere nke nnukwu lego iberibe. Ogige ntụrụndụ a dị ịtụnanya na England dị na Berkshire na ọkara ọkara elekere site na London.
Uzo esi aga na Legoland Theme Park Na Windsor?
Kwesịrị ị na ụgbọ okporo ígwè si London Paddington na Windsor & Eton Central na njikọ, ma ọ bụ zụọ ụgbọ oloko si London Waterloo. mgbe, enwere ụgbọ ala mgbagharị si na ọdụ ụgbọ oloko ọ bụla gaa Legoland.
7. Ogige Asterix Theme Na France
Ọ bụrụ na ị maghị, Parc Asterix na-adabere na Albert Uderzo na Rene Goscinny ama ama na-atọ ọchị, Asterix. Ya mere, nso 2 nde ndị ọbịa na-anụ ụtọ ihe ịtụnanya nke ogige ntụrụndụ nke abụọ kachasị na France. Nke mbụ bụ n'ezie anwansi Disneyland.
N'ogige ntụrụndụ Asterix ị nwere ike ịchọta nnukwu Discobelix ma nwee oge na-agba ọsọ, zute dolphin na anụmanụ ndị ọzọ na Village Gaulois, na n'ezie enwe ndị ọzọ na-akpali akpali na-adọrọ mmasị.
Uzo esi aga na ebe Asterix?
Ogige ntụrụndụ Asterix bụ naanị 30 nkeji si Paris na akara B na RER ụgbọ oloko site na Paris Gare du Nord. Mgbe ahụ ị ga-aga Charles de Gaulle 1 Airport, ma banye n’ọdụ ụgbọ mmiri nke ogige ahụ.
8. Ogige Futuroscope Na France
Egwú na robot, njem oge, ma gaa na 4 nkuku nile nke uwa n’elu, Ogige ntụrụndụ Futuroscope dị n'ụwa a. Ogige ntụrụndụ a dị ịtụnanya dị na mpaghara Nouvelle-Aquitaine mara mma na France.
Futuroscope na - ejikọ sayensị na sayensị ga - abụ ihe anụrị na ahụmịhe maka ezinụlọ dum.
Uzo esi aga na Futuroscope Theme Park?
Nwere ike ịbanye na ogige Pụrụ Iche Futuroscope site na Eurostar gaa Lille ma ọ bụ Paris, ma gbanwee gaa TGV.
9. Chessington World Of Adventures Okwu Park Na UK
Chessington World of Adventures na UK bụ ogige ntụrụndụ safari-themed. Nke a pụtara na nleta ezinụlọ ọ bụla na ogige ntụrụndụ nke Chessington na-eme ka njem ezinụlọ bụrụ ihe omimi na ụwa nke anụ ọhịa na ụwa niile..
Na mgbakwunye na anụ ọhịa, ị nwere ike ịnụ ụtọ ezumike na Safari na Azteca themed hotels, ma gbatịkwuo oge gị. Ya mere, ọ bụrụ n’ị banye n’ime anụ ọhịa, ị ga-enwe oge ịtụnanya n'ogige ntụrụndụ n'oké ọhịa, Nkume Tiger, na ndagwurugwu.
Ezubere ụwa nke Chessington maka ezinụlọ dị egwu, ị ga-enwerịrị oge nke ndụ gị.
Uzo esi aga na Chessington World Of Adventures?
Ogige ogige ọhịa Chessington bụ 35 nkeji si etiti London site ụgbọ oloko. Ya mere, ị nwere ike iji ụgbọ okporo ígwè South-Western site na Waterloo ruo Chessington South ojii.
10. Fantasialand Okwu Isiokwu Na Germany
Na Fantasialand, echiche ụmụaka niile echiche ha mezuru 6 ụwa dị ebube. N’uwa niile, ị pụrụ ịnụ ụtọ kasị atọ ụtọ na-agba ịnyịnya, na nlegharị anya nke ìhè na agba.
Ya mere, ihe na-eme Fantasialand otu nke kachasị mma ogige ntụrụndụ na Europe? Obodo China, Mexico, Africa, Berlin, Obodo Wuze, ihe omimi alaeze, na Rookburgh, na ihe ịtụnanya mma na ụwa niile. Site na Black Mamba ruo Taron a ma ama, ihe ndị a ga-agba gị ume.
Uzo esi aga na Fantasialand?
Nwere ike iji ụgbọ oloko site na ọdụ ụgbọ oloko Bruhl. Fantasialand dị na Bruhl, dị nnọọ 2o nkeji si Cologne.
Iji chịkọta ọchị a, Uche ndị na-enwu gbaa na Europe kere ogige ntụrụndụ kachasị ịtụnanya n’ụwa. Ma ị na-eso ụmụ na-amụ ije njem ma ọ bụ na-eme ụmụaka ndị toro eto maka njem, na 10 ogige ntụrụndụ kachasị mma na ndepụta anyị nwere ebe kachasị mma maka afọ niile.
Ebe a na Zọpụta A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem gị gaa na “10 Best Theme Parks Na Europe”.
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Best Theme Parks In Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-theme-parks-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)